Posted in InterviewsLeaveaComment on ဒါရိုက်တာ ထူးပိုင်ဇော်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ဂီတအနုပညာရပ်ဝန်းမှာ ‘အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသည်းကွဲသောနေ့’ တေးစီးရီးနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ အဆိုတော်ဇွဲပြည့်တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော်စီးရီးဖြစ်တဲ့ ‘ခိုလှုံရာ’ တေးစီးရီးနဲ့လည်း နေရာတစ်ခုကို ရရှိထားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဂီတမှာသာမက သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ပါ ပရိသတ်တွေက သူ့ကိုမြင်တွေ့လာရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ‘မကြီးစန်းနဲ့ ချစ်သူများ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားမှာ ဧည့်သည်သရုပ်ဆာင်အဖြစ် ပါဝင်ထားသလို ‘အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသည်းကွဲသောနေ့’ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့သူပါ။ ‘ပန်းနှစ်ပွင့်စီချင်း’ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇွဲပြည့်ရဲ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင် ‘သရဲဆိုတာ ချို(ဂျို)နဲ့လားဟေ့’ ကို ဧပြီ ၆ ရက်ကစလို့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ ရုံတင်ပြသနေပြီး တတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော်စီးရီးသစ်ကိုလည်း ပြင်ဆင်နေတဲ့ဇွဲပြည့်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ် . . .
■ မေး – ‘သရဲဆိုတာ ချို(ဂျို)နဲ့လားဟေ့’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တာကို အရင်သိပါရစေ။
ဖြေ – ‘သရဲဆိုတာ ချို(ဂျို)နဲ့လားဟေ့’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ကို အန်တီအိအိခိုင်က ကိုဟဲလေးကနေတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို ကမ်းလှမ်းလာတဲ့အခါ ကိုဟဲလေးကိုယ်တိုင်က ကျွန်တော့်ကို သရုပ်ဆောင် အလုပ်တွေပါလုပ်ဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း ကိုဟဲလေးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားက ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်အနုပညာအလုပ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် စလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
■ မေး- ကိုယ့်အတွက် ပထမဆုံးဇာတ်ကားအဖြစ် ကမ်းလှမ်းခံရတာက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်နေတော့ ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲ။
ဖြေ – အဲဒီလိုကမ်းလှမ်းခံရကတည်းက အရမ်းကိုပျော်နေခဲ့မိတယ်။ နောက်ပြီး ရင်လည်းခုန်တယ်။ ကျွန်တော်ဒီဇာတ်ကားကို လက်ခံရိုက်ကူးပါ့မယ်လို့ ဒါရိုက်တာကို ဆက်သွယ်ကတိပေးပြီးတဲ့ အချိန်ကစလို့ ၁၀ ရက် ၁၅ ရက်လောက်က ကျွန်တော့်မှာ ညဆိုလည်း ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်ဘူး။ နေ့ဘက်ဆိုလည်း ဒီဇာတ်ကားရိုက်ဖို့အတွက်ကိုပဲ စိတ်ကရောက်နေတယ်။ ကိုယ့်အနေနဲ့ ဒီသရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို လုပ်မှလုပ်နိုင်ပါ့မလား၊ တကယ်ရောဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကြိမ်ကြိမ်မေးပြီး စဉ်းစားနေခဲ့မိတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကိုယ်က ကင်မရာကြောက်နေသေးတယ်။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အတွေ့အကြုံကမရှိသေးဘူး။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးဇာတ်ကားမှာ အတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်မယ့် သူတွေကလည်း ကိုရန်လေး (ရန်အောင်) တို့ မမို့(မို့မို့မြင့်အောင်) တို့ဖြစ်နေတဲ့အခါ ပိုပြီးတော့လန့်သွားတယ်။ အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုတာကလည်း အရမ်းစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။
■ မေး – ဇွဲပြည့်အတွက် ‘သရဲဆိုတာ ချို(ဂျို)နဲ့လားဟေ့’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးဖို့အတွက် ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲ။ ရိုက်ကူးစဉ်မှာရော ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရလဲ။
ဖြေ – ဒီဇာတ်ကားမရိုက်ခင်တည်းက ကျွန်တော်နဲ့ ယမင်းမေဦးတို့နှစ်ယောက်ကို အန်တီအိအိခိုင်ကခေါ်ပြီး ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေအတွက် စကားပြောတွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေကို လေ့ကျင့်ပေးတယ်။ ဇာတ်ကားကိုနယ်မှာ သွားရိုက်တာဆိုတော့ အပြင်မှာရိုက်ကူးရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေမှာ လူတွေက ၀ိုင်းအုံကြည့်နေပြီး ကိုယ်ကလည်း ကင်မရာကိုကြောက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေက အရမ်းအခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်က စကားနည်းနည်းထစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့ အခက်အခဲလေးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။ ရိုက်ပြီး အက်ရှင်စဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ဘက်က အမှားစလုပ်မိပြီပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘက်က အလုပ်အပေါ်မှာ စိတ်သေချာနှစ်ပြီး အာရုံထားကြိုးစားတယ်။ ဒါရိုက်တာကရော ပါဝင်ကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေ အားလုံးကလည်း ကျွန်တော်တို့တွေအပေါ်မှာ သေချာနားလည်မှုပေးပြီး သင်ပြပြောပြပေးကြတယ်။ အဲဒီအတွက် ကိုယ့်ဘက်က အခက်အခဲဆိုတာတွေကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
■ မေး – အနုပညာအလုပ်တွေကို စပြီးလုပ်ခဲ့တုန်းကရော ဇွဲပြည့်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးရည်ရွယ်ချက်တွေရှိခဲ့လား။
ဖြေ – ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားခဲ့မိဘူး။ ကျွန်တော့်ရည်ရွယ်ခဲ့တာက ပရိသတ်တွေအတွက် စင်ပေါ်မှာ သီချင်းတွေအများကြီး သီဆိုဖျော်ဖြေနိုင်တဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်။ ပရိသတ်တွေချစ်ခင်တဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကိုပဲ ကျွန်တော့်ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် နောက်ထပ်ရရှိလာတဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းတစ်ခု အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
■ မေး – ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်ဖြစ်နေတဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း သိပါရစေ။
ဖြေ – ကျွန်တော့်ရဲ့ တတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော်တေးစီးရီးသစ်ကို အသံသွင်းယူမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ သီချင်းကိုးပုဒ်လောက် အသံသွင်းပြီးပါပြီ သီချင်းတွေနောက်ထပ်ဆက်ပြီး အသံသွင်းတာတွေ လုပ်ပြီးတော့မှပဲ သီချင်းတွေ ပြန်ရွေးပြီးထည့်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ တတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော်တေးစီးရီးမှာတော့ လူငယ်ဆန်တဲ့သီချင်းလေးတွေ သီချင်းအမြူးလေးတွေကို ပိုပြီးထည့်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဂီတအမျိုးအစားကတော့ ကျွန်တော်ဆိုနေကျ ပေါ့ပ်သီချင်းတွေအပြင် ဒီဂျေနဲ့ အီလက်ထရိုပုံစံလေးတွေနဲ့ R&B ပုံစံလေးတွေထည့်ထားတယ်။ သီချင်းမြူးမြူးလေးတွေ လူငယ်ဆန်တဲ့ သီချင်းစာသားလေးတွေကို ပိုပြီးရွေးချယ်ဖို့ စီစဉ်နေတာပါ။ ခုချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဂီတအလုပ်တွေကိုပိုပြီး ဦးစားပေးလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။
■ မေး – ‘သရဲဆိုတာ ချို(ဂျို)နဲ့လားဟေ့’ ရုပ်ရှင်ကိုလာကြည့်မယ့် ပရိသတ်တွေအတွက် ပြောချင်တာရှိရင်။
ဖြေ – ဒီဇာတ်ကားလေးက လူငယ်ပရိသတ်တွေအတွက် အဓိကရည်ရွယ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သရဲဇာတ်ကားဆိုပေမယ့်လည်း တကယ်မှာတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးဖြစ်အောင် တင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်သလို ဒီဇာတ်ကားလေးကြည့်ပြီးရင်လည်း ရင်ထဲမှာ တစ်ခုခုတော့ကျန်နေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လာပြီး ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
■ မေး – ဇွဲပြည့်ရဲ့ သင်္ကြန်အစီအစဉ်နဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် နှစ်သစ်ဆုတောင်းစကားလေး။
ဖြေ – ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ ကျွန်တော်ထားဝယ်မှာရှိမှာပါ။ ပရိသတ်တွေနှစ်သစ်မှာ အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါ။
Posted in InterviewsLeaveaComment on ဇွဲပြည့်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted on April 3, 2018 by Eleven Media Group
‘တကယ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့အချိန်မှာ အမွန်းဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ ကြိုးစားရကျိုးနပ်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်’
Forbes မဂ္ဂဇင်းမှရွေးချယ်ခဲ့သည့် Top 30 Under 30 Asia စာရင်းတွင် မြန်မာတေးသံရှင်အမွန်းအား ပါဝင်ရွေးချယ်ထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသည်။ လူငယ်ထူးချွန်သူများ၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူများ၊ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အောင်မြင်နေသူများအား ရွေးချယ်သည့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး တေးသံရှင်အမွန်းက အဆိုပါကဏ္ဍတွင် ရွေးချယ်ခံရခြင်းကြောင့် Top 30 Under 30 Asia တွေ့ဆုံပွဲနှင့် Global တွေ့ဆုံပွဲများသို့ တက်ရောက်ကာ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာမှ music producer များနှင့်လက်တွဲကာ တေးသီချင်းများ ဖန်တီးထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့်အပြင် မေ ၄ ရက်တွင် ရုံတင်ပြသတော့မည့် ‘ဒုဋ္ဌ၀တီကိုလွန်၍’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင်လည်း ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ထားသူ သရုပ်ဆောင် တေးသံရှင်အမွန်း နှင့်တွေ့ဆုံ၍ Forbes မဂ္ဂဇင်းမှ ရွေးချယ်ခံရသည့်အတွက် ခံစားမှုများ၊ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုအတွေ့အကြုံနှင့် အမှတ်တရများအပါအ၀င် သိလိုသည်များအား မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
■ မေး – Forbes မဂ္ဂဇင်းကရွေးချယ်တဲ့ အသက် ၃၀ အောက်အယောက် ၃၀ စာရင်းမှာ ရွေးချယ်ခံရတဲ့အပေါ် ခံစားချက်ကိုလည်း အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ – အမွန်းရဲ့ခံစားချက်ကတော့ လူငယ်တွေအများကြီးက ထူးချွန်ကြတယ်။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက်နေကြတဲ့ entrepreneur တွေထဲကရွေးချယ်တာပေါ့နော်။ nominee ရွေးချယ်ခံရတယ်ဆိုပြီး အကြောင်းကြားကတည်းက အရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ သူတို့မေးခွန်းမေးတာကို ဖြေရတာလည်းပါတယ်။ ၂၀၀၀ ကျော်ထဲကနေ ၃၀ ကိုပါဖို့တော့ မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ ဘုရားပေးသလောက်ပဲရမှာလေ။ chance ကနည်းတယ်လေ။ တကယ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့အချိန်မှာ အမွန်းဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ ကြိုးစားရကျိုးနပ်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ အမွန်းကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကြောင့်လည်း ဒီိလိုခွန်အားတွေရလာခဲ့တာပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အမွန်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို အမြဲတမ်းအားပေးခဲ့တဲ့ မိဘနှစ်ပါးကိုလည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ အမွန်းရှေ့ဆက်ပြီး လှမ်းသွားမယ့် ခြေလှမ်းသစ်တွေအတွက် အားရှိသွားပါတယ်။
■ မေး – အခုလိုရွေးချယ်ခံရတာက ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲ။
ဖြေ – ရွေးသွားတဲ့အချက်တွေကတော့ အမွန်းတို့ရဲ့ achievement တွေကိုကြည့်တယ်။ အမွန်းတို့ရဲ့ ခံယူချက်တွေကိုမေးတယ်။ မေးခွန်းတချို့မှာပါတာဆိုရင် မင်းဘ၀ရဲ့ အကြီးမားဆုံးကြိုးပမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ရလဒ်တစ်ခုက ဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါ အမွန်းစိတ်ထဲမှာ ခံစားရတဲ့အတိုင်း ဖြေခဲ့တယ်။ လူတွေရဲ့မတူတဲ့အမြင်တွေကြားထဲမှာ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကို၊ လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကြားထဲမှာ ကိုယ်တင်ပြချင်တဲ့အရာတစ်ခုကို သေချာတင်ပြနိုင်ခဲ့တာက achievement တစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်လို့ ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုတင်ပြနိုင်ခဲ့ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတဲ့လူတွေက ဘယ်လိုပဲ ကိုယ့်အပေါ်ဝေဖန်နေပါစေ၊ အခက်အခဲတွေရှိနေပါစေ ကိုယ်သွားချင်တဲ့လမ်းကို တစိုက်မတ်မတ်လျှောက်နိုင်ဖို့ လူငယ်တွေကို inspiration ပေးနိုင်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်လို့ဖြေခဲ့တယ်။ စသဖြင့် အဲဒီလိုအတွေးအမြင်တွေပေါ်မှာလည်း ­ရွေးချယ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ Top 30 ကိုပါတယ်ဆိုတာ Forbes တစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ နိုင်ငံတကာအကဲဖြတ်တွေ သေချာရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ အီးမေးလ်မှာလည်း သေချာရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းလည်းပျော်ရပါတယ်။
■ မေး – အခုလိုရွေးချယ်ခံရတဲ့အတွက် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမှာလဲ။
ဖြေ – ဒီမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့် Top 30 Under 30 Asia အဖွဲ့ဝင်တွေ အကုန်လုံးနဲ့ ဟောင်ကောင်မှာတွေ့ဆုံပွဲရှိပါတယ်။ အဲဒါက အာရှကလူတွေ အားလုံးဆုံမယ့်ပွဲပါ။ အမွန်းတို့အမြင်တွေ ဖလှယ်ကြမယ်။ workshop တွေလုပ်ကြမယ်။ activities တွေလုပ်ရပါမယ်။ 30 Under 30 Global ကလည်း အမွန်းတို့အားလုံးကို အစ္စရေးနိုင်ငံကို ဖိတ်ထားပါတယ်။ workshop တွေရှိမယ်။ ကိုယ်ဘာတွေဆက်လုပ်မယ်။ သူ ဘာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာတွေ ပြောကြမယ်။ အတူပေါင်းလုပ်လို့ရမှာရှိရင်လည်း လက်တွဲပြီး ပေါင်းလုပ်ကြမယ်ပေါ့။
■ မေး – ဘယ်တော့လောက် သွားဖြစ်မလဲ။
ဖြေ – Global ပွဲအတွက်အစ္စရေးကို အရင်သွားရပါမယ်။ မေလဆန်းမှာသွားရမှာပါ။ asia ကတော့ ဇူလိုင်လမှာ ဟောင်ကောင်ကို သွားရပါမယ်။
■ မေး – အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲကိုသွားရတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံကောင်းတွေ ရလာမယ်လို့ထင်လဲ။
ဖြေ – အမွန်းကတော့အဲဒီပွဲမှာ အများကြီးသင်ယူသွားပါမယ်။ အမွန်းကတော့ ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း ပြောပြသွားပါမယ်။ ကိုယ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုတွေအကြောင်းလည်း ပြောသွားမယ်။ မတူတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအများကြီးကို လေ့လာသင်ယူခွင့်ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
■ မေး – သင်္ကြန်အတွက်ရော ဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီလဲ။
ဖြေ – သင်္ကြန်အတွက်ကတော့ သီချင်းတွေ အများကြီးတိုက်ထားပါမယ်။ အကတွေ အများကြီးလည်း တိုက်ထားပါတယ်။ အခုနှစ် သင်္ကြန်က ၁၉ လမ်း MNTV မဏ္ဍပ်မှာ ရှိပါမယ်။
■ မေး – သီချင်းအသစ်ရော တင်ဖို့ရှိဦးမလား။
ဖြေ – မကြာခင်ကရေးထားတဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းသစ်လေးတင်ဖို့ ရှိပါတယ်။ music video လေးနဲ့တွဲပြီး တင်ဖြစ်ပါမယ်။ သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ရအောင် တင်သွားပါမယ်။
■ မေး – ဒုဋ္ဌ၀တီကိုလွန်၍ ဇာတ်ကားကလည်း ရုံတင်တော့မယ်ဆိုတော့ အဲဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ – အမွန်းကတော့ ကိုအာကာတို့အဖွဲ့ရော၊ Golden Hour အဖွဲ့သားတွေကပါ အမွန်းအပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ မျှော်လင့်မှုကိုမြင်ရပါတယ်။ အမွန်းလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီး ပေးထားတဲ့ဇာတ်ညွှန်းအပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အမွန်းရဲ့ အရှိပင်ကိုအတိုင်းကိုပဲ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ခံစားချက်ကတော့ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ ဒီလိုဇာတ်ကားကောင်းမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
■ မေး – ဒီဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ဇာတ်ရုပ်က အမွန်းအတွက် စိန်ခေါ်မှုများခဲ့လား။
ဖြေ – အမွန်းက လှုပ်ရှားမှုပိုင်းမှာ ပြဿနာမရှိဘူး။ ပြဿနာရှိတာက ငြိမ်ပြီး စကားဖြည်းဖြည်းပြောရတဲ့အပိုင်းမှာသာ နည်းနည်းခက်တာပါ။
■ မေး – ဒီဇာတ်ကားမှာ အန္တရာယ်များတဲ့ဇာတ်ကွက်တွေလည်း ပါဝင်ခဲ့ရသလို ဒဏ်ရာရခဲ့တာတွေလည်းရှိတော့ အဲဒီအမှတ်တရတွေလည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ – အမွန်း ဒီဇာတ်ကားမှာ ရောဂါလည်းရခဲ့တယ်။ ရိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ အဖျားက ၁၀၂ က မကျဘူး။ ငှက်ဖျားပိုးလိုပဲ ခပ်ဆင်ဆင်ရောဂါပိုးတစ်ခု ၀င်သွားတာ။ ဆေးတွေကုခဲ့ရပါတယ်။ ကြိုးတံတားကို စတူဒီယိုမှာ ပြတ်ကျတဲ့အခန်းမှာ ကိုနိုင်းနိုင်းရယ် အမွန်းရယ် နောက်တစ်ယောက်ရယ် ပြုတ်ကျသွားတာ။ စတူဒီယိုထဲမှာဆင်ထားတဲ့ သစ်သားတွေလည်း ပြုတ်ကျတယ်။ ကံကောင်းတာက ပြုတ်ကျလာတာတွေက ခေါင်းတွေဘာတွေမထိဘူး။ မဟုတ်ရင်သေမှာ။ အဲဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လူဆိုးတွေလိုက်တဲ့အခန်းဆိုရင်လည်း အမွန်းတို့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကိုပဲ စတန့်သမားတွေသုံးခဲ့တာ။ ကိုနိုင်းနိုင်းက တကယ်မောင်းပြီး အမွန်းက တကယ်လိုက်စီးရတာပေါ့။ အရမ်းလည်းစိတ်လှုပ်ရှားရသလို အန္တရာယ်လည်းများတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုပရိသတ်တွေက အားပေးကြတယ်၊ ကြည့်ချင်ကြတယ်ဆိုတော့ တကယ့်ကို အပင်ပန်းခံရကျိုး၊ စွန့်စားရကျိုးနပ်ပါတယ်။
Posted in InterviewsLeaveaComment on သရုပ်ဆောင်တေးသံရှင်အမွန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခဲ့သည့် လူငယ်အချို့၏ စကားသံများ
မောင် Sut Noi Gon (မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသည့် ကျောင်းသားတစ်ဦး)
■ မေး – နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲခင်ဗျ။ ဒီသင်တန်းကျောင်းကိုရော ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော့်နာမည်ကတော့ မောင် Sut Noi Gon ပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါး ကင်းစင်သွားအောင် လုပ်ပေးမယ့်ကျောင်းကို ကျွန်တော်လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေကနေပြီး ကျွန်တော် ဒီသင်တန်းကျောင်းကို ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တောင်ကြီးကလာတာပါ။
■ မေး – ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ဒီကိုရောက်တာ။
ဖြေ – ကျွန်တော် ၂၀၁၆ ကရောက်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးသမား ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ အချိန်တိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ဆာလောင်နေတယ်။ လူတွေနဲ့ သိပ်မရောထွေးနိုင်ဘူး။ နွေးထွေးမှုမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာတော့ အရင်အချိန်နဲ့ အများကြီးကွာခြားတဲ့အခါကျတော့ အခု လုံးဝ ကိုယ့်ဘ၀ပြန်လန်းဆန်းလာတယ်။ အခု လူတွေနဲ့ နွေးနွေးထွေးထွေး ပြန်ရှိလာတယ်။ ယုံကြည်မှုတွေရှိလာတယ်။
■ မေး – အခုသင်တန်းမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတွေ သင်ပေးတယ်လို့သိရတယ်။ ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေ သင်ပေးတာလဲ။
ဖြေ – ဒီဟားဗတ်ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို Union AID ကနေပြီးတော့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုပေးတာပေါ့နော်။ ဒီထဲကနေ ကျွန်တော်က ပေါင်မုန့်ဖုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာ ကိတ်ကို အဓိကထားပြီးတော့ သင်ခဲ့တာ။ ခက်ခဲမှုတွေမရှိဘဲ ကောင်းမွန်စွာနဲ့ ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
■ မေး – သင်တန်းပြီးရင် ဘာတွေဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော်က သင်တန်းကာလ တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီ။ ပြီးရင် နောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာ ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ဒီမုန့်ဖုတ်တာကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားမှာလို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။
■ မေး – ကိုယ်တိုင်ကလည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကို ကျော်ဖြတ်လာခဲ့တယ်။ အခု မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေတဲ့ သူတွေကိုရော ဘာပြောချင်သလဲခင်ဗျ။
ဖြေ – ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာ၊ ခံစားခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာ ယုံကြည်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးလာတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် မျှော်လင့်ချက်မဲ့တယ်။ အခုပြောချင်တာက မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးနေတဲ့သူတွေကို ခွန်အားပေးချင်တဲ့အရာက ဘ၀ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်အရာကို ယုံကြည်ထားလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပျောက်နေတာကို ပြန်လိုက်ရှာဖို့ဖြစ်တယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးက ကျွန်တော်တို့ဘ၀မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဘ၀က ကောင်းတဲ့အရာတွေကို ထပ်ပြီးတော့ မျှော်လင့်ဖို့ဖြစ်တယ်။
■ မေး – မူးယစ်ဆေးဝါးကိုရော ဘယ်လိုစပြီး သုံးစွဲဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
ဖြေ – ဘယ်လိုစပြီးသုံးစွဲဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စမ်းရင်းစမ်းရင်းနဲ့ သုံးဖြစ်သွားတာ။
ကိုလှဂျာအောင် (မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးသည့် ကျောင်းသားတစ်ဦး)
■ မေး – နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲခင်ဗျ။ ဘယ်ဒေသကလာလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော့်နာမည် လှဂျာအောင်ပါ။ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားကလာတာပါ။ ကျွန်တော် မူးယစ်ဆေးဝါးသမားဖြစ်လာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ခြောက်လပိုင်းမှာ ဒီသင်တန်းနဲ့ ဆက်သွယ်မိတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရောက်စက ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကအစ ပိန်ခြောက်ခြောက်နဲ့ပေါ့။ ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် လူတကာကတွေ့ရင် ဘာများခိုးမလဲ။ ဒါမျိုးရုပ်တွေ။ အခုတော့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းကအစ ပြောင်းလဲသွားတာ။ အစတုန်းကဘ၀နဲ့ အခုဘ၀ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် နှိုင်းယှဉ်လို့တောင်မရပါဘူး။
■ မေး – မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတုန်းက ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ တွေ့ခဲ့ရလဲ။
ဖြေ – မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတုန်းက ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင် မွေးမိခင်တွေတောင်မှ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးကျေးကျွန်ဘ၀ ရောက်လာတဲ့သူတွေကို စွန့်ပစ်ချင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ သားအရင်းလို့တောင်မှ မသတ်မှတ်ချင်တော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲဖို့အတွက် အိမ်ကိုလိမ်တယ်။ လိမ်လို့မရရင် အိမ်ကပိုက်ဆံ ဘယ်နားမှာထားလဲ ဒါကိုကြည့်တယ်။ ကြည့်ပြီးသွားရင် ခိုးတယ်။ နောက်ဆုံး အိမ်ကပိုက်ဆံခိုးရင်း ခိုးရင်း ပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ခရစ်ယာန်တွေဆိုရင် အိမ်မှာ ပုံးတွေချိတ်ထားတယ်။ အဲဒီအလှူပုံးတွေကအစ ကျွန်တော်တို့ကခိုးတယ်။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရှိရင် အိမ်မှာဒုက္ခအများကြီးပေါ့။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတဲ့အခါ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ဆိုးကျိုးဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့အိမ်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့မိသားစု၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကစ အကုန်လုံးကို ဆိုးကျိုးဖြစ်သွားစေတာဖြစ်ပါတယ်။
■ မေး – အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းအနေနဲ့ရော ဘာသင်တန်းတက်ထားလဲ။
ဖြေ – အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းအနေနဲ့ မုန့်သင်တန်းကို ကျွန်တော်တက်နေတာဖြစ်တယ်။ သင်တန်းကာလ ငါးလတက်ပြီးသွားပြီ။ အခု ဟားဗတ်ကျောင်းမှာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ ပါဝင်ဆက်ကပ်နေတာဖြစ်တယ်။ မုန့်ပညာကို သင်နေတယ်။ မုန့်တိုက်အနေနဲ့ မလုပ်နိုင်ရင်တောင်မှ မုန့်ဖြန့်ချိရေးအနေနဲ့လုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
■ မေး – မူးယစ်ဆေးဝါးကို ဘယ်လိုကြောင့် စပြီးသုံးစွဲဖြစ်သွားတာလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော် မူးယစ်ဆေးဝါးစသုံးစွဲတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပျော်ဆိုပြီးတော့ သုံးစွဲတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်က ကျောက်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ ကျောက်ရှာတယ်။ ကျောက်အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က သိပ်မကွာဝေးဘူး။ အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးရှူလိုက်ရင် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ တစ်ခါလောက်သုံးစွဲလိုက်ရင် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ တကယ်ပေါ့ပေါ့လေးပဲ သဘောထားပြီး သုံးရင်းသုံးရင်းနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ကျွေးကျွန်ဘ၀ ဖြစ်သွားတာပါ။
Posted in InterviewsLeaveaComment on မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခဲ့သည့် လူငယ်အချို့၏ စကားသံများ
ဆေးဖြတ်သင်တန်းကျောင်း Harvest Rehabilitation Center က ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးဇော်တောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
“လေ့ကျင့်မှုကတော့ သူတို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးတဲ့အတွက် အကျင့်စာရိတ္တတွေ ပျက်စီးနေတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ကျွန်တော်တို့က အရင်ပြုပြင်ပေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆို မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးရဖို့အတွက် သူတို့ကလိမ်ရတယ် . . .”
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုမှာ ဒုတိယအများဆုံး နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ (International Narcotics Control Board-INBC) ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ် ၁ ရက်မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအစီရင်ခံစာအရ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့မှာ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံပဲ ရှိပါတော့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ဘယ်လောက်များပြားနေတယ်ဆိုတာ ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စံချိန်တင် မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းမိမှုတွေကလည်း သက်သေတစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုနေတဲ့ လူငယ်၊ လူကြီးအင်အားဟာလည်း ထုနဲ့ထည်နဲ့ ရှိနေနိုင်မှာမလွဲပါဘူး။ ဒါကြောင့် မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှည်းကူးမြို့နယ်က ဆေးဖြတ်သင်တန်းကျောင်းဖြစ်တဲ့ Harvest Rehabilitation Center က ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးဇော်တောင်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
■ မေး – ဒီသင်တန်းကျောင်းကို ဘယ်လိုထူထောင်ဖြစ်တာလဲခင်ဗျ။
ဖြေ – ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မြန်မာပြည်အနှံ့ကို သွားဖူးတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေက မူးယစ်ဆေးဝါးမှာ သူတို့ဘ၀တွေပျက်စီးနေတယ်။ သူတို့ရုန်းထွက်ချင်တယ်။ ထွက်လို့မရဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ သူတို့ကို ကျွန်တော်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ စေတနာစိတ်က ကျွန်တော့်အထဲမှာ ဖြစ်လာတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးတဲ့ မိသားစုတွေပေါ့နော်။ သူ့မိသားစုတွေက အရမ်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သတ်ရင် ပူလောင်တယ်။ ကြေကွဲခံစားရတယ်ပေါ့။ အဲဒါလေးကို ကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာ ဒီမိသားစုရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပူလောင်ခက်ခဲခံနေရတာကို အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီမယ်ဆိုတဲ့ စေတနာစိတ်နဲ့ ဒီကျောင်းကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
■ မေး – ဘယ်အချိန်မှာ စလုပ်ခဲ့ကြလဲခင်ဗျ။ သင်တန်းကျောင်းကရော ဘယ်အချိန်မှာ စထောင်ခဲ့လဲ။
ဖြေ – ၂၀၁၂ ကတည်းက ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာစလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းကျောင်းထောင်တာကလည်း ၂၀၁၂ ကတည်းက ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။
■ မေး – မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှာ ဘယ်အရွယ်တွေ အများဆုံးတွေ့ရလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော်ဆီ ရောက်လာတာကတော့ ၁၈ နှစ်နဲ့ ၂၄ နှစ်ကြားထဲမှာများတယ်။ နောက်အိမ်ထောင်ကျပြီးသား အသက် ၄၀ ကျော်တွေ။ အဲဒါကတော့ နည်းတာပေါ့။
■ မေး – ဆေးလာဖြတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကရော ဘယ်ဒေသတွေကလာကြလဲ။
ဖြေ – နယ်ပေါင်းစုံကပါပဲ။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်က ပိုများပါတယ်။
■ မေး – ဆေးလာဖြတ်ကြတဲ့ သင်တန်းသားဦးရေရော ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲခင်ဗျ။
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့ ခြောက်နှစ်အတွင်းမှာ ၂၄၂ ယောက်ရှိသွားပါပြီ။ အခုလက်ရှိက ၂၄ ယောက်ရှိပါတယ်။
■ မေး – ဆေးဖြတ်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုရော ဘယ်လိုလေ့ကျင့်မှုတွေ လုပ်ပေးတာလဲခင်ဗျ။
ဖြေ – လေ့ကျင့်မှုကတော့ သူတို့ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးတဲ့အတွက် အကျင့်စာရိတ္တတွေ ပျက်စီးနေတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ကျွန်တော်တို့က အရင်ပြုပြင်ပေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆို မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးရဖို့အတွက် သူတို့ကလိမ်ရတယ်၊ ညာရတယ်၊ ခိုးရတယ်၊ လုရတယ်။ အဲဒီစိတ်ပိုင်းလေးတွေကို အရင်ပြင်ပေးပြီး နောက်ပိုင်းမှာမှ ကျမ်းစာသင်ပေးပါတယ်။ ပြီးရင် သူတို့ဘ၀အနာဂတ်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတယ်။ ပြီးရင် ဂီတသင်ပေးတယ်။
■ မေး – သူတို့သင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာရော သူတို့အတွက် အလုပ်ရှာပေးရတာမျိုးတွေရှိလား။
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့က လိုက်ပြီးရှာပေးရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ကို လက်ခံဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲတယ်လေ။ သူတို့တစ်ခုခုလုပ်မှားရင်လည်း ကျွန်တော့်ခေါင်းပေါ်ရောက်လာမှာလေ။ ကျွန်တော်က အားလုံးကို ဒီသင်တန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့ ကျောင်းသားတွေအားလုံးကို ရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာ လက်ခံပြီးတော့ သူတို့ကိုလုပ်ခိုင်းတယ်။ လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း သူတို့တကယ်ကြိုးစားပါတယ်။ တကယ်လည်း အောင်မြင်ပါတယ်။
■ မေး – ဒီသင်တန်းကျောင်းကထွက်သွားတဲ့ လူငယ်တွေက ဘယ်လိုနယ်ပယ်တွေမှာ ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးတွေ လုပ်ကိုင်နေကြသလဲခင်ဗျ။
ဖြေ – တချို့ကတော့ အနုပညာဘက်ရောက်သွားတယ်။ အောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတောင် မလာနိုင်အောင် အလုပ်များသွားတာပေါ့နော်။ တချို့ကျတော့ ဘာသာရေးထဲမှာ ဦးဆောင်တဲ့ဆရာတွေဖြစ်သွားတယ်။ တချို့ကျတော့ စီးပွားရေးလောကထဲ ရောက်သွားတယ်။ တကယ်လည်း အောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ တချို့ကျ ဒီကျောင်းကနေပြန်သွားပြီးတော့ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေ မူးယစ်ဆေးဝါးထဲမှာ မရောက်အောင်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်တွေ ရှိသွားတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အများကြီးဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
■ မေး – ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာများ ရှိပါသလားခင်ဗျ။
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းကျောင်းကတော့ ကိုယ်ထူကိုယ်ထလုပ်ရတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။ အဲဒီတော့ အခက်အခဲအများကြီးရှိပါတယ်။ ကလေးတွေအိပ်မယ့်အဆောင်တို့ ဘာတို့လည်း အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ ကျောင်းစာသင်မယ့်နေရာတွေလည်း အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ တကယ်ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေ၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကို လာလေ့လာလို့ရတယ်။ အတူတကွ ၀ိုင်းပြီးတော့ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အားလုံးကို ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ အားလုံးလူငယ်တွေ ပျက်စီးနေတာတွေကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးဖြတ်ဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ဆီကို လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းနဲ့သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။
Posted in InterviewsLeaveaComment on ဆေးဖြတ်သင်တန်းကျောင်း Harvest Rehabilitation Center က ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးဇော်တောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
မန္တလေး နည်းပညာကုမ္ပဏီ၏ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးဇော်နိုင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted on March 25, 2018 March 25, 2018 by Eleven Media Group
လက်ရှိအချိန်မှာ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီး ဥပဒေကြမ်းမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်မယ့် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်နဲ့လည်း အကျေအလည် ဆွေးနွေးနေတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက မြို့တော်ဝန်၊ အတွင်းရေးမှူးနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက ရွှေသံလွင်၊ ရွှေတောင်၊ ကမ္ဘောဇ၊ Asia World ၊ ရှိုင်းဆောက်လုပ်ရေး၊ ဒဂုန်အင်တာနေရှင်နယ်၊ မက်စ်မြန်မာ၊ သုခရတနာ၊ Oriental Highway စတဲ့ တိုင်ကွန်းကုမ္ပဏီကြီးတွေက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ Yangon Infrastructure Development Public (YIDP) ကုမ္ပဏီဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းကလည်း လူမှုကွန်ရက်မှာ ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို စည်ပင်ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ခရိုနီတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်တော့မယ် ဆိုရာမှာ ရွှေသံလွင်ရဲ့ တွက်ချက်မှုအရ စီမံကိန်းတစ်ခုကတင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခုနစ်ဘီလျံ ကုန်ကျမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားတာကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက ကျပ်တည်းနေတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ၀န်ဆောင်မှုပေးလာမယ့် ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အခွန်အခဖိစီးမှုဒဏ် ခံနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာ စိုးရိမ်ပူပန်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလို စိုးရိမ်ပူပန်သံတွေအတွက် YIDP အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းကို လူမှုကွန်ရက်မှာ တင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မန္တလေး နည်းပညာကုမ္ပဏီက မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးဇော်နိုင်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာကို ပြည်သူတွေ သိရှိပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
“ဒီအစိုးရမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ နီးစပ်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီအစိုးရက ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သွေးတည်း တစ်သားတည်း ရှိနေတယ်ဆိုရင် အစိုးရက ဘယ်လိုစဉ်းစားနေလဲဆိုတာ ပြည်သူတွေက သိနေရမှာပေါ့။ အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ သိမနေဘူး . . . .”
မေး – အဓိက မေးချင်တာက ခရိုနီတွေနဲ့ ပေါင်းလုပ်မယ်။ ဒီပုဒ်မဖြုတ်လိုက်လည်း သူတို့က ပေါင်းလုပ်မယ် ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ အစ်ကို့အမြင်လေး သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ – ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေပေါ့။ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရနဲ့ စည်ပင်က အလုပ်တွေ မနိုင်မနင်း ဖြစ်နေတယ်လို့ မြင်ရတယ်။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် မသိဖြစ်နေတယ်လို့လည်း ကျွန်တော်က မြင်ရတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့အတွက် အဖြေရှာတယ်။ အဖြေရှာတော့ PPP (Public-private partnership) လုပ်သင့်တာမျိုး မြင်လာကြတယ်။ အဲဒီလို မြင်လာတော့ ထလုပ်တယ်။ ထလုပ်တော့ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းအရဆိုရင် အလုပ်တွေ အကုန်လုံးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုး။ နောက်တစ်ခုက အဲဒီအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတင် မဟုတ်ဘဲ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ ကြေညာထားတာတွေကလည်း ရှိတယ်။ မြို့သစ်လည်း တည်မယ် ဆိုတာကလည်း ရှိတယ်။ ဒါက ပထမဆုံး မြင်ရတဲ့ အခြေအနေပေါ့။ ဒုတိယ အချက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့က အသွင်ကူးပြောင်းဆဲ ကာလပါ။ ရန်ကုန်အပါအ၀င် မြန်မာပြည်က အခုမှ ခေတ်တစ်ခေတ် အသစ်ကို သွားနေတာ။ ပြန်စနေတာ။ အဲဒီတော့ တို့မှာ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ဘယ်လိုမြို့ကြီးအဖြစ် မြင်ချင်တာလဲဆိုတဲ့ အမြင်ရှိဖို့လိုတယ်။ Vision ရှိရမယ်။ ဘယ်လိုလုပ်မယ် ဆိုတဲ့ဟာကို ပြန်ချဉ်းကပ်တာပေါ့။ တကယ်တမ်းကျတော့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စမှာ အနာဂတ် ရန်ကုန်ကိုတို့က ဘယ်လိုမြင်ချင်တာလဲ။ ဥပမာအားဖြင့် နယူးယောက်လိုမျိုး Commercial City အနေနဲ့ မြင်ချင်တာလား။ ဥပမာအားဖြင့် ပေဂျင်း (ပီကင်း) လိုမျိုး မြို့တော်လည်း ဖြစ်တယ်၊ Tourist Attraction လည်းရှိတဲ့ မြို့တော်လိုမျိုး မြင်ချင်တာလား။ ဥပမာအားဖြင့် Green City လို နေရာတစ်ခုအဖြစ် မြင်ချင်တာလား။ အဲဒီလိုမျိုးတို့က ကိုယ့်ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ဘယ်လိုမြင်ချင်တာလဲဆိုတဲ့ Vision ရှိဖို့ လိုအပ်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မသိဘူး။ သူတို့ဆီမှာ Vision ရှိ မရှိကို။ အနာဂတ် ရန်ကုန်ဟာ ဘယ်လိုဖြစ်ချင်သလဲ ဆိုတာ။ ရေတိုကာလ တစ်ခုမှာ၊ ရေရှည်ကာလ တစ်ခုမှာ။ နောက်တစ်ခါ ကြားကာလ တစ်ခုမှာ အနာဂတ် ရန်ကုန်ကို ဘယ်လိုမြင်ချင်သလဲဆိုတဲ့ အမြင် ရှိ မရှိ ကျွန်တော်ကတော့ မသိဘူး။ အမှန်တော့ ဒီအစိုးရမှာ Transparency ရှိရင် ဒီအစိုးရမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ နီးစပ်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီအစိုးရက ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သွေးတည်း တစ်သားတည်း ရှိနေတယ်ဆိုရင် အစိုးရက ဘယ်လိုစဉ်းစားနေလဲဆိုတာ ပြည်သူတွေက သိနေရမှာပေါ့။ အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ သိမနေဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာ Green City အဖြစ် သွားနေတာလား။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာ အဆင်ပြေသလို သွားနေတဲ့ မြို့တော်ကြီး ဖြစ်နေလား။ အဲဒီ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းထဲမှာပဲ ကြည့်လိုက်ရင် ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို မြို့တော်ဝန် ပုံဖော်ထားတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူးလေ။ စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲ။ အမှိုက်တွေနဲ့ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့ မြို့တော်ကြီးတစ်ခုအဖြစ် သူက ပုံဖော်ထားတာ။ ဟုတ်ပြီ။ အခုလက်ရှိ အခြေအနေမှာတော့ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတယ်။ ညစ်ပတ်နေတယ်။ ဒီ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ဘယ်လို ပြောင်းလိုက်မှာလဲဆိုတဲ့ Vision ကို မမြင်ရဘူး။ ဒါက Vision ကိစ္စ။ နောက်တစ်ခုက Master Plan ပေါ့။ အနာဂတ် ရန်ကုန်အတွက်ကို တို့က ဘယ်လိုသွားမလဲ။ မဟာဗျုဟာတွေ နည်းဗျုဟာတွေ ရှိဖို့လိုလာပြီ။ အဲဒီနေရာမှာ JICA ကနေ မဟာဗျုဟာ Master Plan တစ်ခု ဆွဲခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီ Master Plan ရှိတယ်။ သို့သော် အဲဒီ Master Plan အတိုင်း လုပ်မှာလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် သူ့ Master Plan ကိုကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဟာလေးတွေကို ယူမယ်။ မလိုချင်တဲ့ဟာတွေ ပယ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် Master Plan နဲ့ ဆွဲမှာလား။ ဆိုပါတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီး ပုံသဏ္ဌာန်က ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မှာလဲ။ City Center ကို ဘယ်လိုမျိုး ဖြန့်ထုတ်မှာလဲ။ ဥပမာအားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ မြို့ပတ်လမ်းတွေ (Ring Road) တွေက ဘယ်လိုရှိမှာလဲ။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လမ်းပိုင်းတွေ ချိတ်ဆက်မှုက ဘယ်လိုရှိမှာလဲ။ ဒါတွေကို သူက Master Plan ရှိဖို့ လိုအပ်တယ်။ နောက်တစ်ခါ ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ လူဦးရေတိုးနှုန်း၊ ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ လူမှုရေးပုံစံတွေ၊ စီးပွားရေးပုံစံတွေ ဒါတွေအားလုံးကို သူတို့ သိနေပြီးတော့ သူတို့က Master Plan နဲ့ သွားနေသလား ဆိုတာ တို့ သာမန်ပြည်သူတွေရော ရန်ကုန်မြို့တော်သူ၊ မြို့တော်သားတွေရော မသိဘူး။ အဲဒီတော့ မသိတဲ့ကိစ္စတွေ ရှိတယ်။ မသိတဲ့ဟာတွေကို ထားလိုက်ပါတော့။ သူတို့ မဟာဗျုဟာတွေ ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ အခါကျတော့ OK ရန်ကုန်မြို့ကြီးကတော့ မနိုင်မနင်း ဖြစ်နေတယ်။ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတယ်။ ညစ်ပတ်နေတယ်။ အဲဒါတွေကို လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောတယ်။ အခုနက ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း PPP လုပ်မယ်ဆိုပြီး ထလုပ်တယ်။ PPP လုပ်မယ်ဆိုလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိရမယ်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ပါလာမယ်ဆိုရင်လည်း ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍက ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ ကန်ထရိုက်ပေးပြီး လုပ်မှာလား။ တင်ဒါတွေ ခေါ်မယ်။ တင်ဒါတွေ ခေါ်တဲ့အခါမှာလည်း တစ်ခုပြီးမှတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုချင်းပေါ့။ ဒီလိုမျိုးလုပ်ရမှာ။ အခုဟာက ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေ ၁၀ ခုလောက်နဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ အကုန်လုံးကို လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်မြို့ မပြောနဲ့ ရောမမြို့ကြီးကိုလည်း တစ်ရက်တည်းနဲ့ တည်ဆောက်လို့ မရဘူး။ အဲဒီတော့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုလည်း သုံးနှစ်အတွင်း အပြီး တည်ဆောက်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က ဒီသုံးနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ရောမမြို့ကြီးလို ဖြစ်သွားအောင်၊ နယူးယော့ခ်လို ဖြစ်သွားအောင်၊ စင်ကာပူလို ဖြစ်သွားအောင် တည်ဆောက်ချင်နေတာလား မသိဘူး။
မေး – လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေမှုက ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
ဖြေ – သေချာတာကတော့ အဲဒီလိုမျိုး စိတ်ထဲရှိတာ ထလုပ်လို့ မရဘူး။ ထလုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားလည်း မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ရှန်ဟိုင်းတို့၊ ဆိုးလ်တို့၊ လန်ဒန်တို့၊ ပေကျင်းတို့၊ နယူးယောက်တို့ မြို့ကြီးတွေက တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ နှစ်အများကြီးနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ။ နောက်တစ်ခုက တစ်မြို့နဲ့ တစ်မြို့ တည်ဆောက်ပုံတွေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံတွေ၊ တည်နေရာတွေ၊ စီးပွားရေး အခြေအနေတွေ၊ လူမှုရေး အခြေအနေတွေက မတူကြဘူး။ အဲဒီတော့ ရှန်ဟိုင်းမြို့ဆိုပါစို့။ ဒီမြို့ဟောင်းနဲ့ မြို့သစ်ကို တည်ခဲ့တာ ၁၅ နှစ်ကြာတယ် ဆိုပါစို့။ ရန်ကုန်မြို့ကိုလည်း ၁၅ နှစ်အတွင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့လိုဖြစ်အောင် တည်မယ်ပေါ့။ ဆိုပါတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံဟာ အခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်အောင် အနှစ် ၂၀ ကြာခဲ့တယ် ဆိုပါတော့။ စင်ကာပူကို တည်ခဲ့တာတောင် အနှစ် ၂၀ ကြာခဲ့တာ။ တို့က အနှစ် ၂၀ တောင် မဟုတ်ဘူး။ ၁၅ နှစ်အတွင်း ဆိုပါတော့။ အဲဒီလိုမျိုး စိတ်ထဲမှာ ရည်ရွယ်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုပ်လို့ရနိုင်လား မရနိုင်ဘူးလားဆိုတာကို ချင့်ချိန်ဖို့ လိုတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ငွေကြေး အခြေအနေက သူတို့နဲ့ မတူဘူးလေ။ သူတို့ရဲ့ ဂျီဒီပီ၊ သူတို့ရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု စွမ်းအား၊ သူတို့ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု စွမ်းအားတွေက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မတူဘူးလေ။ အဲဒီတော့ ပြောရရင် စိတ်ရှိတိုင်း၊ စိတ်ထဲမှာ ရှိတာတွေ ထပြီး လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာ ပြောချင်တယ်။
မေး – ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုလောက်နဲ့ လုပ်လာမယ်။ ဒီကုမ္ပဏီတွေက ပြည်သူတွေဆီကနေ အခွန်အခတွေ ကောက်လာမယ် ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး လုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာရော၊ လက်ရှိ တိုင်းပြည် အခြေအနေအပေါ်မှာရော သူတို့ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးမှာ သူတို့ တောင်းဆိုမယ့် ၀န်ဆောင်ခ ငွေကြေးပမာဏတွေကို ပြည်သူတွေက ပေးဆောင်နိုင်ပါ့မလား။
ဖြေ – အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းမှာ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်လှိုင်မော်ဦးက ပြောသွားတယ်။ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံး သုံးသွားတယ်။ အဲဒီ ငါးကြင်းဆီ နဲ့ ငါးကြင်းကြော်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးက အမှန်တကယ်တော့ သူပြောချင်တာ ရန်ကုန်မှာ ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့အင်အားနဲ့ လုပ်မယ်ပြောတာပေါ့။ အမှန်တော့ ဒီလုပ်ငန်းတွေကို ရွှေသံလွင်က တွက်ချက်ထားတာ တစ်ခုရှိတာပေါ့။ လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်း တွက်ချက်ထားတာကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခုနစ်ဘီလျံ၊ ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀၀ လောက် ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီကုမ္ပဏီတွေက အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀၀ လောက် ချမ်းသာတဲ့ကုမ္ပဏီ ဘယ်ကုမ္ပဏီရှိလဲ။ ပြောစမ်းပါ။ ပြစမ်းပါ။ အဲဒီကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုပေါင်းရော ဒေါ်လာ သန်း ၇၀၀၀ ချမ်းသာလား။ အဲဒီတော့ သန်း ၇၀၀၀ လောက် တန်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ စီမံချက်တွေကို ဒီကုမ္ပဏီတွေကို ပေးမယ်။ လုပ်ကြဆိုတော့။ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်မယ်ဆိုတာ အဲဒီ ငါးကြင်းဆီက ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ဆီ မဟုတ်တော့ဘူး။ ပြည်သူတွေရဲ့ဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်မှာ။ ပြည်သူတွေဆီကနေ အခွန်အကောက် တိုးကောက်မှာ။ ပြည်သူတွေရဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ဒီကုမ္ပဏီတွေက ဒီအလုပ်တွေကို လုပ်မှာ။ အဲဒီတော့ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော်မယ် ဆိုရင် ဒီကုမ္ပဏီတွေက ပြည်သူတွေ မြို့တော်သူ မြို့တော်သားတွေဆီက အခွန်အကောက်တွေ ကောက်ပြီးတော့ လုပ်မှာ။ အဲဒီတော့ တကယ်တမ်း ဘေးကျပ်နံကျပ် တကယ်ဖြစ်မှာက အဲဒီအချိန်ကျရင် အစိုးရပဲဖြစ်မှာ။ ဘာကြောင့် အဲဒီလိုပြောသလဲ ဆိုတော့ အခု YBS လုပ်တယ်။ အခု ကားခတွေ တိုးကောက်ထားတယ်။ အရင်တုန်းက ၁၀၀ လောက် ကုန်တာကို ၂၀၀ လောက် ပေးရတယ်။ အခု ၃၀၀ တန်ကားတွေ အသစ်ဆွဲလာတယ်။ အဲဒီတော့ ပြည်သူတွေဆီက တိုးကောက်တယ်။ အဲဒီတော့ ပြည်သူတွေက သူတို့ ကုန်ကျစရိတ်များလာတော့ အော်တယ်။ အော်တော့ ဘယ်သူ့ဆီအော်လဲဆို အစိုးရဆီ အော်တာလေ။ အဲဒီတော့ အစိုးရက ကြားညပ်လိမ့်မယ်။ ပြည်သူနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြားမှာ အစိုးရက ကြားညပ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ တကယ်တမ်းကျတော့ ဒီအစိုးရက ဘယ်လောက်ခံမှာလဲ။ နောက်အနှစ် ၂၀ လုံး ဒီအစိုးရက ဆက်လုပ်နေမှာလား။ ဥပမာအားဖြင့် ဒီ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် နောက်ထပ် အနှစ် ၂၀ ဆက်ဖြစ်နေမှာလား။ ဦးမောင်မောင်စိုးကရော မြို့တော်ဝန် အနှစ် ၂၀ ဆက် ဖြစ်နေမှာလား။ အဲဒီတော့ ဒီလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဖို့ဆိုတာ သုံးနှစ်နဲ့ ပြီးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ရှစ်နှစ်နဲ့လည်း ပြီးမှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ အဲဒီလောက် အဝေးကြီး ဆက်လုပ်နေမှာလား။ သူတို့လုပ်ရင် သူတို့က ကြားညပ်မှာ။ သူတို့ မလုပ်ရင် နောက်တက်လာတဲ့ အစိုးရက ကြားညပ်မှာ။ နောက်တက်လာတဲ့ အစိုးရက ကြားမညပ်ဦးတော့ ရှေ့အစိုးရ လုပ်သွားတာ နောက်အစိုးရက ဖျက်လို့မရတဲ့ အခါကျတော့ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ ဒီကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကို စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးပေးခဲ့ရာ ရောက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေအတွက်ကို ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ နစ်နာမှုတွေ၊ ဖိနှိပ်မှုတွေကို ဖန်တီးပေးခဲ့သလို ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။
မေး – လက်ရှိမှာဆို ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့က ဦးဝင်းအောင်တို့၊ ဦးရှိန်ဝင်းတို့၊ ဦးသာဌေးတို့ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေပါတဲ့ Yangon Metropolitan Development Public ကုမ္ပဏီဆိုပြီး ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းအတွက် ဖွဲ့ထားတာ ရှိတယ်။ အခုလည်း Yangon Development Public ကုမ္ပဏီဆိုပြီး ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ဖို့ လုပ်နေတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းမှာလည်း စက်သုံးဆီဆိုင်တွေ ဖွင့်ဖို့ ကုမ္ပဏီထောင်မယ် ဆိုပြီး ပြောထားတာ ရှိသေးတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး အစိုးရက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အပေါ်မှာ မှတ်ချက်ပေး ပေးပါ။
ဖြေ – အစိုးရက အစိုးရအလုပ်ကို လုပ်ရမှာ။ အစိုးရက စီးပွားရေး ၀င်လုပ်လို့ မရဘူး။ အစိုးရက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို ပိုင်တဲ့ သာဓကတွေ ရှိတယ်။ စင်ကာပူမှာလည်း အစိုးရ ရှယ်ယာတွေနဲ့ အစိုးရက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို ပိုင်တာတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေဟာ သူတို့ဘာသာ စီးပွားရေးလုပ်ကြပြီး အစိုးရက ရှယ်ယာတွေ ရှိနေတာ။ အဲဒီတော့ အခုပဲ လွှတ်တော်မှာ မေးခွန်းထုတ်နေပြီ။ YBS မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ရှိတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရက ပြည်သူတွေရဲ့ ပိုက်ဆံ၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဘတ်ဂျက်၊ ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာငွေတွေကို သုံးပြီးတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို အခု ဘယ်သူက တာဝန်ခံမှာလဲ။ အဲဒီပိုက်ဆံတွေက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းထဲမှာ ၀င်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ရှုံးခဲ့ရင် ဘယ်သူ တာဝန်ခံမှာလဲ။ ကျွန်တော်တို့က ပြည်သူတွေရဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ ချောမွေ့စေရေးကို သုံးတာပါလို့ ပြောလို့မရဘူး။ ဒါက သုံးတာ မဟုတ်ဘူး။ ကုမ္ပဏီထဲမှာ ရှယ်ယာ ၀င်ထည့်ထားတာ။ အဲဒီတော့ ဒီပိုက်ဆံက ပျောက်ပျက်သွားလို့ မရဘူး။ တာဝန်ခံဖို့ လူရှိရမယ်။ တာဝန်ခံရမယ်။ ဒီအစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ်တွေ မြို့တော်ဝန်တွေ ဆင်းသွားတဲ့ အချိန်ကျရင် နောက်ဝန်ကြီးချုပ်တွေ၊ မြို့တော်ဝန်တွေက တာဝန်ခံရမှာလား။ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ် ကိုယ်တာဝန်ခံဖို့ လိုတယ်။ အဓိက အရေးအကြီးဆုံးက အစိုးရဟာ အစိုးရအလုပ် လုပ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အစိုးရက စီးပွားရေး ၀င်လုပ်ရင် ရှေ့မှာ သာဓကတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်။ ဦးနေ၀င်း။ နောက်ဆုံးကျတော့ အနုတ်လက္ခဏာ ပြပြီးတော့ ဆင်းပြေးရတယ်။ အဲဒီတော့ တိုင်းပြည်က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အနိမ့်ဆုံး LDC နိုင်ငံအဖြစ် ရောက်သွားတယ်။ အခုဟာက ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကို ပြန်ပြီးတော့ သွားသလို ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့က ပြောတယ်။ ဒါဟာ ဆိုရှယ်လစ် မဟုတ်ဘူး။ စီးပွားရေး လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြောတာက တစ်မျိုး၊ တကယ်တမ်း ကျတော့ သူတို့က ရှယ်ယာ ၀င်လုပ်တာလို့ ပါတယ်။ ပြီးတော့ကျ အဲဒီရှယ်ယာဝင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီထဲမှာ BOD အနေနဲ့လည်း ၀င်ပါမယ် ပြောတယ်။ အဲဒီအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းကိုပဲ ပြန်ကြည့်ရင် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းမှာကို ပြောနေတာတွေက ရှေ့နောက် မညီတာ အများကြီးပဲ။ အဲဒီတော့ အကောင်းဆုံးကတော့ အစိုးရက အစိုးရအလုပ် လုပ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။ Government Intervention ဆိုတာ အစိုးရကိုယ်တိုင်က ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ကိုယ်မြင်ချင်တဲ့ ပုံစံအဖြစ် ပုံဖော်ဖို့အတွက်ကို သူတို့အနေနဲ့ စည်းကမ်းတွေ၊ ဥပဒေတွေ၊ နည်းဥပဒေတွေ ထုတ်လို့ရတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် လမ်းမကြီး တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ သစ်ပင်တွေ ရှိချင်ရင် သစ်ပင်တွေ စိုက်ဖို့အတွက်ကို လမ်းမကြီး တစ်ဖက်တစ်ချက်ကို လူသွားစင်္ကြံ ရှိရမယ်။ နောက်တစ်ခါ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့အတွက် ငါးပေ ထပ်ချန်ရမယ်။ ရေမြောင်းတွေအတွက် ဘယ်နှပေရှိရမည် ဆိုတာမျိုး ဥပဒေတွေ နည်းဥပဒေတွေ ထုတ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ပုံဖော်ရမှာ။ ဒီလိုပဲ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း စည်းကမ်းတွေ၊ နည်းလမ်းတွေ၊ ဥပဒေတွေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ရမှာ။ အခွန်အကောက်ဆိုလည်း အဲဒီလိုပဲ။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ဘယ်လိုပုံ မြင်ချင်တာလဲ ဆိုတာကို Government Intervention အစိုးရ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ ပုံဖော်ရမယ့်အစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၀င်လုပ်ပြီးတော့ အဲဒီကရတဲ့ ငွေနဲ့ ပုံဖော်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ ကျွန်တော်မြင်တာတော့ လုံးဝမှားနေတယ်။
အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted in InterviewsTagged PPPLeaveaComment on မန္တလေး နည်းပညာကုမ္ပဏီ၏ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးဇော်နိုင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီ ကြည်စိုးထွန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted on March 24, 2018 by Eleven Media Group
‘ရုပ်ရှင်သမားတွေ အနုပညာဖန်တီးရာမှာ ပရိသတ်တွေအတွက် အကျိုးပြုမပါရင်တောင် အတုခိုးမှားတာတွေ မထည့်ကြပါနဲ့၊ စေတနာထည့်သွင်းပြီး ဖန်တီးကြပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်’
အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆု များစွာရရှိထားကာ ရုပ်ရှင်၊ စာပေအနုပညာဖန်တီးမှုများအား လက်ရှိအချိန်အထိလည်း ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက်လည်း လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးလျက်ရှိသူတစ်ဦးမှာ ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီ ကြည်စိုးထွန်းပင်ဖြစ်သည်။ မတ် ၂၃ ရက်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲတွင် ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည့် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုများအား စိစစ်အကဲဖြတ်ရွေးချယ်ခဲ့သူများတွင် ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီ ကြည်စိုးထွန်းလည်း တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းလာခဲ့သည့် အနုပညာအတွေ့အကြုံများအားအခြေခံကာ အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုများနှင့် အထိုက်တန်ဆုံးအနုပညာရှင်များဆု ဆွတ်ခူးနိုင်ရန်အတွက် ပါဝင်အကဲဖြတ်ပေးခဲ့သည့် ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီ ကြည်စိုးထွန်းနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ယခုနှစ် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆု စိစစ်အကဲဖြတ်မှုအတွေ့အကြုံများ၊ ဇာတ်ကား ၅၃ ကားအပေါ် ဝေဖန်သုံးသပ်မှုများ၊ အနုပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များအတွက် အကြံပေး သုံးသပ်လိုသည်များကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
■ မေး – အခုနှစ်အကယ်ဒမီ စိစစ်အကဲဖြတ်မှုတွေ ပြုလုပ်ရာမှာ ခါတိုင်းနှစ်တွေထက် ဇာတ်ကားအရေအတွက် နှစ်ဆလောက် များပြားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီလိုဇာတ်ကားအများကြီးကို စိစစ်ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံလေး အရင်သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ – ဒီနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့က စိစစ်အကဲဖြတ်အဖွဲ့ဝင် ၃၁ ယောက်ရှိတယ်။ နောက်တော့ ဦးသန်းညွန့်က ဒုတိယဆင့်မှာ သူ့ဇာတ်ကားပါသွားတော့ အကဲဖြတ်အဖွဲ့က ထွက်ပေးတယ်။ ဆိုတော့ အယောက် ၃၀ ကျန်တာပေါ့။ ဘယ်လိုအကဲဖြတ်လဲဆိုရင် ဆက်ကြည့်သင့်တဲ့ကားကို (၁) လို့ပေးတယ်။ မကြည့်သင့်တဲ့ကားကို သုညပေးလိုက်တယ်။ အားလုံးပေးကြတဲ့ အမှတ်ကိုပေါင်းပြီး ဇာတ်ကားအရေအတွက်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ လောက်ပဲ ဒုတိယဆင့်ကိုပါလာတာပါ။
■ မေး – ပထမဆင့်မှာကြည့်ရတဲ့ ဇာတ်ကား ၅၃ ကားရဲ့အရည်အသွေးကို အကြမ်းဖျင်းသုံးသပ်ပါဆိုရင် ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်ပါလဲ ဆရာ။
ဖြေ – ဝေဖန်ရေးဆရာတွေကို ပြချင်တာပါ။ စိန်ခင်မောင်ရီတို့၊ စံရှားတို့ပေါ့။ စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ညစ်သည်ဖြစ်စေ၊ မညစ်သည်ဖြစ်စေ ကြည့်ရတာပေါ့လေ။ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကို တစ်ခုပြောချင်တာက ပိုက်ဆံကို သိပ်တော့ပြူးတူးပြဲတဲ ရှာစရာမလိုပါဘူး။ စေတနာလေးထားပြီး ရှာကြပါလို့တော့ ပြောချင်တယ်။ ကြည့်ရင်းနဲ့ ခံစားရတာပေါ့လေ။ ကိုယ်လည်း ရုပ်ရှင်သမားပါပဲ။ အခြားနည်းနဲ့လည်း ပိုက်ဆံရှာလို့ရပါတယ်။ အများကြည့်တဲ့အခါ အတုယူမှားလောက်တာတွေ ရိုက်ပြီး ပိုက်ဆံမရှာစေချင်ဘူး။ ကြည့်လိုက်ကြတဲ့အခါ အများအားဖြင့် အကဲဖြတ်အဖွဲ့ဝင်တွေက သိသာပါတယ်။ ရှုံ့တွပြီး စိတ်ညစ်သွားကြတာပေါ့။
■ မေး – ဒီနှစ်မှာ ကားကောင်းတွေနဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှု အသစ်တွေလည်း ပါနေတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုခံစားရပါလဲဆရာ။
ဖြေ – အားရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မမြင်တဲ့ အမြင်မျိုးလေးတွေ မြင်တတ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ၁၉၄၁ ခုနှစ်လောက်က Citizen Cane ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ ဇာတ်ညွှန်းရေးနည်းက သိပ်ထူးဆန်းတယ်။ မင်းသားသေတဲ့ အခန်းကစတယ်။ အခုလည်း အဲဒီလိုသဘောမျိုးပေါ့။ လူငယ်တွေဖန်တီးထားတာက ပုံမှန်မဟုတ်သော ဇာတ်ညွှန်းရေးနည်းပေါ့။ နံပါတ် (၁) ကနေ ၁၀ ကိုသွားတာမဟုတ်ဘူး။ နံပါတ် ၁၀ အရင်လာမယ်။ ပြီးရင် (၈) လာမယ်။ ပြီးတော့ (၉) ပေါ်လာတာမျိုးပေါ့။ ပရိသတ်က ထလို့ကိုမရဘူး။ အလွတ်မခံနိုင်ဘူး။ အဲဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းမျိုးလည်းပါတယ်။ ဓာတ်ပုံလည်းကောင်းတယ်။ အသံလည်း ဇာတ်ကားအများစုကောင်းတယ်။ ဇာတ်ကား ၅၃ ကားမှာ ကား ၅၀ လောက်ကိုကောင်းတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျေနပ်ရပါတယ်။
■ မေး – ဒုတိယအဆင့်မှာ အကဲဖြတ်ရတဲ့အခါမှာရော အခက်တွေ့ရတာမျိုးရောရှိလား။
ဖြေ – ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ပထမဆင့်မှာ ကျွန်တော်က (၁) ပေးပေမယ့် (၁) ပေးတဲ့သူနည်းတာကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါကတော့ ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်ကိုပြောတာပါ။ ဆိုလိုတာက ဇာတ်ကားကောင်းတာတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါ။ ကောင်းတဲ့ကားပါသလို စိတ်ပျက်စရာတွေလည်းပါတယ်။ ဒုတိယဆင့် ပြန်ကြည့်ရာမှာတော့ အပြိုင်းအရိုင်းဖြစ်နေတယ်။ မင်းသားတွေရော မင်းသမီးတွေပါ အရမ်းကောင်းကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီအချိန်မှာ သံယောဇဉ်စိတ် ဖျောက်ရတယ်။ စံချိန်စံညွှန်းစာရွက်နဲ့ကြည့်ပြီး အပြစ်ရှာရတယ်။ သူတို့က သိပ်ကောင်းနေတော့ အပြစ်ကိုပဲလိုက်ရှာရတာပေါ့။ သူဘယ်နေရာလိုအပ်တာရှိလဲ၊ အ၀တ်အစားက သူ့ဇာတ်ကောင်စရိုက်နဲ့ ဘယ်လောက်ညီမလဲ။ ဆင်းရဲတဲ့ဇာတ်ရုပ်ဆိုရင် brand အကောင်းစားတွေ ၀တ်ထားမယ်ဆိုရင် မကိုက်တော့ဘူးလေ။ အင်္ကျီအ၀တ်အစားတောင် ကြာကြာဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီနဲ့အသစ်ကို ဟောင်းအောင် လုပ်ထားတာမတူဘူးလေ။ အဆင်အပြင်၊ ဆံပင်ပုံစံ၊ သရုပ်ဆောင်မှု အားလုံးကိုသေချာကြည့်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ ထူးခြားလာတာက အမူအရာလုပ်တာကို မကြည့်ပါနဲ့။ ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သွားတာကို ကြည့်ပါဆိုတာကို တော်တော်ပြောဖြစ်ကြတယ်။ သိပ်သရုပ်ဆောင်နေတာလား ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အဲဒီလိုအသေးစိတ်လေးတွေကအစ သတိထားစိစစ်ခဲ့ပါတယ်။
■ မေး – တည်းဖြတ်တို့၊ အသံတို့၊ ဇာတ်ညွှန်းဆုတို့လို အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သုံးသပ်ပေးပါဦး။
ဖြေ – ဇာတ်ညွှန်းဆိုရင် ကန့်သတ်ထားတာက ဇာတ်ညွှန်းစာအုပ်တင်ဖို့ ပြောထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း သေချာဖတ်တယ်။ မူရင်းဝတ္ထုရှိရင် မူရင်းဝတ္ထုကိုပါဖတ်ပါတယ်။ ကော်ပီဇာတ်ကားဆိုရင် ကော်ပီဇာတ်ကားကိုပါ လိုက်ကြည့်တယ်။ ပရိသတ်ကိုလည်း အားကိုးပါတယ်။ ပရိသတ်ကကိုယ့်ထက် ပိုပြီးကြည့်နိုင်အားရှိပါတယ်။ နောက်နှစ်တွေမှာတော့ စဉ်းစားထားတယ်။ ကော်ပီရှိရင် ကော်ပီဇာတ်ကားကိုပါ တစ်ခါတည်းတွဲတင်ဖို့ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ စံချိန်စံညွှန်းမှာက ကော်ပီဇာတ်ကားဆိုရင် ဒါရိုက်တာဆုနဲ့ ဇာတ်ကားဆုကိုမပေးဘူးပေါ့။ အဲဒီလို စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ကိုက်ပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့တာပါ။
■ မေး – အထူးဆုနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ရင်ခုန်မှုက အမျိုးမျိုးဖြစ်နေကြတယ်နော် ဆရာ။
ဖြေ – အထူးဆုက ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။ အထူးဆုက အဓိကဆုတွေထဲက မဟုတ်တာမျိုး ပိုပြီးဖြစ်သင့်တယ်။ အထူးဆုဆိုပြီး မင်းသားဆု၊ မင်းသမီးဆု ထပ်မပေးသင့်ဘူး။ ကလေးသရုပ်ဆောင်ဆုတော့ ပေးလို့ရတယ်။ မနှစ်ကဆိုရင် အထူးဆုကို ဇာတ်ကားဆု ထပ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒါက နည်းနည်းအငြင်းပွားစရာဖြစ်သွားတာပေါ့။ သူတို့ကလည်း အရမ်းကြိုးစားထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပေးလိုက်တာဖြစ်မှာပါ။ ပေးမယ်ဆိုရင် make-up တို့၊ costume တွေ၊ production designer လိုမျိုးတွေ ပေးလို့ရပါတယ်။ အသံဆိုရင်လည်း သီချင်းလိုသပ်သပ်ပေးတာ မရှိသေးဘူး။ မှုန်ရွှေရည်လိုသီချင်းတွေ သိပ်ကောင်းတယ်ဆိုရင် ပေးလို့ရတယ်။ အထူးဆုကတော့ အကဲဖြတ်အဖွဲ့တွေရဲ့ တစ်ဦးချင်းဆန္ဒတွေအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းက ဘယ်လိုပေးချင်တယ်ဆိုတာကို အားလုံးသေချာရေးကြတယ်။ အဲဒီအပေါ် ပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့။
■ မေး – အကဲဖြတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးရှိသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီနှစ်က ကျေနပ်စရာဖြစ်ရဲ့လား ဆရာ။
ဖြေ – ကျေနပ်ပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေက နည်းလည်းနည်းတယ်။ ဒီနှစ်ကရွေးရခက်ပေမယ့် ဇာတ်ကားတွေ ကောင်းတာတွေပါလာတော့ ကျေနပ်ပါတယ်။
■ မေး – နှစ်တိုင်းကဝေဖန်မှုက အမြဲရှိတတ်တော့ ဆရာတို့အနေနဲ့ ပြောချင်တာများရှိမလား။
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့က အကယ်ဒမီစိစစ်အကဲဖြတ်တဲ့ စံချိန်စံညွှန်းတွေကို အစောကြီးကတည်းက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေနဲ့ ပြန်ကြည့်ပေးကြပါ။ ပရိသတ်က ကျွန်တော်တို့ကို မေတ္တာပို့ကြမယ်ဆိုရင်လည်း ဇာတ်ကား ၅၃ ကားစလုံးကို ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာနိုင်မယ်ပေါ့လေ။
Posted in InterviewsLeaveaComment on ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီ ကြည်စိုးထွန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted in InterviewsTagged အိန္ဒြာကျော်ဇင်LeaveaComment on သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Posted in InterviewsTagged ယွန်းယွန်းLeaveaComment on ယွန်းယွန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတိုင်းတွင် ပါဝင်ရသည့် ဇာတ်ကောင်စရိုက်အပေါ် တစ်ထပ်တည်းကျအောင် ခံစားသက်ဝင်ကာ သရုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည့် သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီဖွေးဖွေးမှာ မတ် ၁၆ ရက်တွင် ရုံတင်ပြသတော့မည့် ‘ရွှေကြာ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၌ မကောင်းသည့်အလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုရသော်လည်း ရိုးသားဖြူစင်ကာ သူတစ်ပါးအား ကူညီလိုစိတ်ရှိသူ၊ မိမိချစ်ရသူနှင့် ဆုံစည်းချိန်တွင်လည်း အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသည့် မိမိဘ၀အတွက် ကြေကွဲဝမ်းနည်းရပုံများအား ကြည့်ရသူများ ရင်နင့်ခံစားရသည်အထိ ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်ထားသူ ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာမပုညခင်၏ ‘အရှေ့တံခါးအ၀င်’ ၀တ္ထုအား ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီဝိုင်းက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအဖြစ် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်ဒမီဖွေးဖွေးနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ရွှေကြာဇာတ်ရုပ်အတွက် ခံစားသက်ဝင်နိုင်ရန် လေ့လာပြင်ဆင်ခဲ့ရသည်များ၊ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အမှတ်တရများနှင့် ဇာတ်ကားမှတစ်ဆင့်ပေးလိုသည့် Message များအား မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
■ မေး – ရွှေကြာဇာတ်ကားအတွက် မကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ဖို့ တော်တော်လေးကို လေ့လာပြင်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီပြင်ဆင်မှုအပိုင်းလေးတွေကို အရင်ပြောပြပေးပါဦး။ ပြီးတော့ ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ မျှော်လင့်ချက်ပေါ့။
ဖြေ – ဒီဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဖွေးရဲ့တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်က ဒီဇာတ်ကားထဲက ရွှေကြာလိုမိန်းကလေးတွေကို ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေရစေချင်တယ်။ အမှန်တရားကို လက်ခံစေချင်တယ်။ ရွှေကြာလိုမိန်းကလေးတွေ ဒီဘ၀ထဲက တတ်နိုင်သလောက် ရုန်းထွက်ဖို့ ခွန်အားတစ်ခု ရစေချင်တာကြောင့်ပါ။ ကျန်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့ ဘာမှမရှိပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကားထဲက ရွှေကြာဇာတ်ရုပ်အတွက် လေ့လာခဲ့ရတာကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖွေးက ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနားမှာနေတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကန်ပေါင်ပေါ်မှာ အဲဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးတွေ တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဒီဇာတ်ကားထဲက စံထားညိုဖြစ်သလို ဒီမိန်းကလေးတွေကို အထင်သေးတာတွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ဒီမိန်းကလေးတွေအပေါ် နားလည်လာတယ်။ သူတို့ရဲ့ မဖြစ်ချင်ဘဲနဲ့ ဖြစ်နေရတဲ့ဘ၀တွေ၊ ရုန်းကန်ရတဲ့ အခြေအနေတွေကိုပေါ့။ ဒီဇာတ်ကောင်အတွက် လေ့လာတဲ့အခါ ရွှေကြာလိုမိန်းကလေးတွေကို စောင့်ရှောက်တဲ့စင်တာတွေရှိပါတယ်။ အရမ်းတော့ မဖွံ့ဖြိုးသေးဘူးပေါ့။ အဲဒီစင်တာတွေကိုသွားပြီး အဲဒီမိန်းကလေးတွေနဲ့ စကားပြောတယ်။ သူတို့နေပုံထိုင်ပုံ အပြုအမူတွေကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
■ မေး – ရွှေကြာလိုမိန်းကလေးတွေရဲ့ အပြုအမူခံစားချက်တွေကို အနီးကပ်လေ့လာတာမျိုးတွေရော လုပ်ဖြစ်ခဲ့လား။
ဖြေ – ဟုတ်ကဲ့ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ စကားပြောကြည့်တယ်။ ဒီဘ၀ကို အခြေအနေကြောင့် ရောက်နေရပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် ရုန်းထွက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေ၊ ကိုယ်နေရတဲ့ဘ၀က အမှောင်ထဲမှာဆိုပေမယ့် အခက်အခဲကြုံတဲ့သူတွေကို တွေ့တဲ့အခါ ပြန်ကူညီချင်တဲ့စိတ်ရှိသူတွေလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
■ မေး – ဖွေးဖွေးအနေနဲ့ ရွှေကြာလိုမိန်းကလေးမျိုးတွေကို ပြောချင်တဲ့စကားလေးရှိရင်လည်း သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ – ဒါကတော့ စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားရိုက်တုန်းက ရွှေကြာဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်မှာ ခဏလေးဝင်ပြီး နေရတုန်းမှာတောင် စိတ်တွေအရမ်းမွန်းကျပ်ပြီး ပင်ပန်းရပါတယ်။ အရမ်းလည်း ၀မ်းနည်းရတယ်။ အဲဒီလိုခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက် ဒီလိုမိန်းကလေးတွေကို အရမ်းကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ဒီဘ၀ကနေ အမြန်ရုန်းထွက်လိုက်ပါတော့လို့ ပြောမယ့်အစား ကိုဝိုင်းတို့လို၊ ဆရာမပုညခင်တို့လို ပညာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ ဒီလိုသင်ခန်းစာရမယ့် ဇာတ်ကားမျိုးရိုက်လိုက်တာ ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဖွေး ပြောချင်တဲ့စကားတွေ၊ Message တွေအကုန်လုံးက ဒီဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
■ မေး – ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာ စိုးရိမ်စိတ်ရောရှိခဲ့လား။
ဖြေ – ဖွေး အလုပ်တစ်ခု လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ စိုးရိမ်တာတွေ၊ Pressure တွေက ကိုယ့်ကိုအလုပ်လာအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ဖွေးစိုးရိမ်တာတွေ၊ ဖိအားတွေအားလုံးကို ထားခဲ့ပြီး ရွှေကြာအတိုင်းပဲနေခဲ့ပါတယ်။
■ မေး – ရွှေကြာလိုမိန်းကလေးမျိုးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ ဖွေးဖွေးခံစားမိတဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ – ဒီလိုဘ၀မျိုးကိုတော့ ဘယ်မိန်းကလေးကတော့ ဖြစ်ချင်မှာလဲနော်။ တန်ဖိုးထားခံရတဲ့ မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ချင်ကြတာချည်းပဲလေ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ နေချင်မှာပဲလေ။ ဒီဇာတ်ကားရိုက်တုန်းကလည်း ဖွေး တော်တော်လေး စိတ်ထဲမှာခံစားခဲ့ရတယ်။ ဇာတ်ကားရိုက်ပြီး နှစ်ပတ်လောက်တော့ ကိုယ့်စိတ်ထဲကခံစားချက်ကို သက်သာအောင် ပြန်ကုယူရတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ အဲဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးတွေ တွေ့ခဲ့ရင်လည်း ဖော်ဖော်ရွေရွေ စကားပြောဖြစ်တယ်။ ညီမလေးတို့အတွက် ရွှေကြာရိုက်ထားတယ်နော်လို့။ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်နော်လို့ပြောတော့ ကြည့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။
■ မေး – ဒီဘ၀ကနေ ရုန်းထွက်ချင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် ပြောချင်တာမျိုးရှိသေးလား။
ဖြေ – ဒီလိုရုန်းထွက်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲတော့ခက်ခဲမှာပေါ့လေ။ လွယ်လွယ်ကူကူတော့ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။ ရွှေကြာလိုဘ၀ကို ရောင်းစားခံခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတွေ၊ အနိုင်ကျင့် စော်ကားခံရတဲ့မိန်းကလေးတွေ အပြင်မှာလည်း အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ကျူးလွန်တဲ့သူကသာ တစ်ခါတည်း ကျူးလွန်လိုက်တာလေ။ ခံစားရတဲ့သူကတော့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ခံစားသွားရတာ။ မုဒိမ်းမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ဥပဒေအတိုင်း ထိထိရောက်ရောက် ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
■ မေး – အခုဒီဇာတ်ကား ရုံတင်တော့မယ်ဆိုတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ – ဖွေး ဇာတ်ကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ ရွှေကြာဆိုတဲ့ဇာတ်ရုပ်ကို တစ်ထပ်တည်းကျအောင် အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီး၊ ခံစားချက်ကို အပြည့်အ၀ထည့်ပြီး ရွှေကြာဆိုတဲ့မိန်းကလေးအနေနဲ့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အခုရုံတင်တော့မယ်ဆိုတော့ ရင်တွေခုန်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကြည့်ပြီးတဲ့အခါ ဒီဇာတ်ကားအပေါ် အမြင်လေးတွေလည်း သိချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာက ဖွေးတို့ဖန်တီးကတည်းက သိစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ၊ ရသွားစေချင်တဲ့ Message တွေလည်းပါဝင်တာကြောင့် ပိုပြီးရင်ခုန်ပါတယ်။
■ မေး – ပရိသတ်ကို ပြောချင်တဲ့ စကားလက်ဆောင်များရှိရင် ပြောပေးပါဦး။
ဖြေ – ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ ရွှေကြာဆိုတဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံးခံစားပြီး သရုပ်ဆောင်ထားသလို သူတို့တွေခံစားနေရတာတွေကို စာနာတတ်ဖို့၊ သူတို့အတွက် ဆုံးရှုံးနေရတဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေကို ရရှိလာစေဖို့ ကြိုးစားဖန်တီးထားကြပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်ခွင့်ရတဲ့အခါ ကျေနပ်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အားပေးကြပါဦးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Posted in Entertainment, InterviewsLeaveaComment on အကယ်ဒမီဖွေးဖွေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း